Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौँ । सन् २०१८ को पहिलो छ महिनामा पाँच लाख २० हजारभन्दा बढी बाह्य पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०१७ को सोही अवधिमा चार लाख ६० हजार ३०४ पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । पर्यटकीय
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बडबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । ऊर्जामन्त्रालयमा आज भएको शिष्टाचार भेटमा ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । भेटमा मन्त्री पुनले आफु ऊर्जा मन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेसँगै ऊर्जा
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ४ वटा कम्पनीको ६२ लाख ४९ हजार ५१३.२१ कित्ता हकप्रद र बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । जसमा ५० लाख २५ हजार १८३.१८ कित्ता हकप्रद र १२ लाख २४ हजार ३३०.३ कित्ता बोनस रहेको छ । सूचीकृत हुनेमा सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्सुरेन्सको ३० लाख १९
काठमाडौं । तारा एअर प्रालिले आफ्नो नयाँ ट्विनअटर वायुयान भित्र्याएको छ। सो विमान सेसेयल्स, माल्दिभ्स, भारत हुँदै काठमाडौं अवतरण गरेको
प्राकृतिक विज्ञान संग्राहलय वैज्ञानिकहरुको हव वन्दै
सम्बृद्धिको यात्रा आरम्भ गरेको प्रदेश नम्बर तीनको बजेटलाई नजिकबाट नियाल्दा …
महुरेगढीमा आँखा आकारको पोखरीले पर्यटक लोभ्याउँदै
यस्ता छन् प्रदेश तीनलाई नमुना बनाउने
काठमाडौँ । सन् २०१८ को पहिलो छ महिनामा पाँच लाख २० हजारभन्दा बढी बाह्य पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कअनुसार यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०१७ को सोही अवधिमा चार लाख ६० हजार ३०४ पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । पर्यटकीय दृष्टिकोणले ‘अफ सिजन’ मानिने बर्खा
डेढ सय वर्षपछि स्वरुप फेरिँदै सदरलाइन…
यसरी बनाउँदैछ सञ्चयकोषले पाँचवर्षीय रणनीतिक योजनाको खाका
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ४ वटा कम्पनीको ६२ लाख ४९ हजार ५१३.२१ कित्ता हकप्रद र बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । जसमा ५० लाख २५ हजार १८३.१८ कित्ता हकप्रद र १२ लाख २४ हजार ३३०.३ कित्ता बोनस रहेको छ । सूचीकृत हुनेमा सबैभन्दा धेरै
काठमाडौँ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजार बढ्ने अपेक्षामा रहेका लगानीकर्तालाई शेयर बजारले निराश बनाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अंकले घटेको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो
प्रभु बैंकको संस्थापक सेयरमा कटअफ मूल्य
नेपाल बैंकको १ करोड ७६ लाख
५ लाख ४० हजार कित्ता आइपिओ
काठमाडौं । तारा एअर प्रालिले आफ्नो नयाँ ट्विनअटर वायुयान भित्र्याएको छ। सो विमान सेसेयल्स, माल्दिभ्स, भारत हुँदै काठमाडौं अवतरण गरेको हो । वरिष्ठ क्याप्टेन प्रभाकरप्रसाद घिमिरे, पवनसिंह नगरकोटी तथा प्राविधिक सहयोगार्थ ईन्जिनियर जगत लामा रहेको चालकदलले सो विभान आइतबार साँझ भित्रयाएको हो । चालकदलका साथमा
भारतीय र चिनियाँ पर्यटक बढे, छ महिनामै
महुरेगढीमा आँखा आकारको पोखरीले पर्यटक लोभ्याउँदै !
म्याग्दीमा ट्रेकिङ ट्रेल निर्माण
सौराहामा आकर्षक प्रवेशद्वार निमार्णको काम तीव्र
काठमाडौं । सानिमा बैंकले सानिमा अनलाइन कर्जा सिमा परीक्षण तथा कर्जा आवेदन दिने प्रविधि ल्याएको छ । ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखि ल्याइएको सो प्रविधी अनर्तगत कम्प्युटर, मोवाइल वा ट्यावलेट जस्ता उपकरणहरुको प्रयोग गरी घरै बसि आफ्नो कर्जा सिमा थाहा पाउन सकिने सानिमा बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा
सरकारको प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व बैंकलाई
वाणिज्य बैंकहरुबाट कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनमा रु
मेगा बैंकको अध्यक्षमा पुनः शाह, यस्तो छ नयाँ संचालक समिति
१ हजार सीसीभन्दा बढीका कार र १५० सीसीभन्दा बढीका बाइकमा कर बढ्यो
शेयर लगानीकर्तासँग अर्थमन्त्री भने ‘मैले एकथोक बोल्छु, ब्याख्या अर्कै भएर आउँछ’
बिद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीे, दुई सातादेखि गाउँमा विजुली बलेन
बुझेर किन्नुहोस यस्तो छ आज तरकारीको मुल्य
टेलिकमले नौ महिनामा कमायो ११ अर्ब खुद मुनाफा
मानवरहित ‘मेडिकल ड्रोन’ को पहिलो उडान म्याग्दीबाट
श्यामकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा प्रवासी नेपाली मंच कोलोराडो राज्य कमिटी सर्वसम्मत
कोलोराडो सप्ताहको आम्दानी खर्चको प्रतिवेदन तयार पार्न लेखापरिक्षण समिती गठन
भारतमा निपा भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १० पुग्यो
भक्तपुरमा अधिकांश पसल गैरकानूनी